गुलियो खानाले मात्र हुँदैन मधुमेह, जान्नैपर्ने केही तथ्य - Naya Pusta
गुलियो खानाले मात्र हुँदैन मधुमेह, जान्नैपर्ने केही तथ्य
✍️ नयाँ पुस्ता प्रकाशित मिति : २०७५ जेष्ठ २९, मंगलवार ०८:४३
‘चिनी रोग’ नेपाली समाजमा यसै भनिन्छ, मधुमेह अर्थात डाइविटिजलाई । नाम नै ‘चिनी रोग’ भनेपछि चिनी जोडिने नै भयो । आम धारणा के छ भने, चिनी खानेहरुलाई चिनी रोग लाग्छ। साथसाथै जसले चिनी सेवन गर्दैनन् उनीहरु मधुमेहको जोखिममा हुँदैनन्।
सामान्य रुपमा हामीले यस्तै बुझेका छौं। तर, के यो बुझाई सही हो?
भनिन्छ, ‘गुलियो धेरै नखानु, नभए चिनी रोग लाग्छ ।’ चिकित्सकले पनि मधुमेह रोगीलाई चिनी एवं गुलियोको मात्रा कम गर्न सुझाउँछन् । किनभने गुलियो खानाले मधुमेहलाई थप बढाइदिन्छ । तर, यर्थाथ के पनि हो भने, गुलियो खानेकुरासँग मधुमेहको कुनै लिनुदिनु छैन । मधुमेह यस्तो समस्या हो, जसले शरीरमा अरु रोगलाई निम्तो गर्छ । मधुमेह रोगीको दृष्टिमा समस्या आउन सक्छ । मिर्गौंला र कलेजोको समस्या आउन सक्छ ।
यस्तो रोग आखिर किन र कसरी लाग्छ रु कसलाई लाग्छ? गुलियो खानेकुरासँग मधुमेहको के सम्बन्ध छ?
यी भ्रमका पछि नलाग्नुहोस्
गुलियो खाएमा मधुमेह हुन्छ । यदि तपाईं पनि यस्तै सोच्नुहुन्छ भने आफ्नो सोचाई बदल्नुहोस् । गुलियो खाँदैमा मधुमेह हुँदैन । मधुमेह हुनुमा वंशानुगत र अन्य कारण बढी जिम्मेवार हुन्छ । यद्यपी मधुमेहले ग्रस्त भइसकेपछिको अवस्थामा गुलियो खानेकुरा सेवन गर्दा शुगर अनियन्त्रित हुन्छ ।
मधुमेहका रोगीलाई अक्सर सल्लाह दिने गरिन्छ कि, उनीहरुले सुगर फ्रिचिज खानुपर्छ । जबकी मधुमेह रोगीको खाना शुगर फ्रि मात्र होइन, क्यालोरी फ्रि पनि हुनुपर्छ ।
मधुमेह र चिनी
दुई प्रकारको मधुमेह हुन्छ, टाइप(१) र टाइप(२) । यी दुबै मधुमेहको भिन्नतालाई सजिलै थाहा पाउन सकिन्छ । टाइप १ मधुमेहमा इन्सुलिन उत्पादन गर्ने कोशिका तपाईको प्रतिरक्षा प्रणालीद्वारा नष्ट हुन्छ । जबकी टाइप २ मधुमेहमा तपाईको शरीरले प्यानक्रियाजद्वारा उत्पादन हुने इन्सुलिन प्रयोग गर्न सक्दैन ।
यो पनि पढ्नुहोस् : काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभर किन यति गर्मी ?
मधुमेहको रोगीले कम खानुपर्छ, भलै तपाई थोरै थोरै खानुहोस् । तर, आवश्य पनि खाइरहनुहोस् । मानिसहरु के सोच्छन् भने, मधुमेह बुढ्यौलीमा लाग्छ । तर, यो सबै उमेर समूहमा लाग्न सक्छ । बालकदेखि बयस्कसम्म ।
मधुमेह किन हुन्छ?
निन्द्रा पुरा नहुनु
हामी कामको चक्करमा पर्याप्त निन्द्रा लिदैनौ । राती अबेर सुत्ने, बिहान चाडै उठ्ने बानी पनि कतिपयको हुन्छ । तर, पर्याप्त निन्द्रा पुगेन भने विभिन्न रोग लाग्न सक्छ । त्यसमध्ये मधुमेह पनि एक हो ।
दिनमा कम्तिमा ८ देखि १० गिलास पानी पिउनुपर्ने हुन्छ । तर, पानीको मात्रा पुगेन भने शरीरमा ब्लड शुगरको मात्रा बढ्छ ।
राती अबेर खाने
राती अबेर भोजन गर्दा शरीरको तौल बढ्छ । यसले ब्लड शुगर लेभल असन्तुलित हुन्छ ।
जसको शरीरको तौल बढी हुन्छ, उनीहरुले मोटोपन नियन्त्रणका लागि कुनै पहल गरेनन् भने मधुमेहले गाज्न सक्छ ।
निष्क्रिय जीवनशैलीले शरीरलाई रोगको भण्डार बनाउँछ । जीवन सक्रिय हुनुपर्छ । यसका लागि नियमित व्यायाम आवश्यक हुन्छ ।
फेसबुकमा यस्तो परिवर्तन, हेर्नुहोस् के के हुँदैछ?
मुग्लिङ सडकमा सात ठाउँमा पहिरो, बाटो अवरुद्ध
आगामी राष्ट्रपतिय चुनावमा भाग लिने ट्रम्पको औपचारिक घोषणा